Waalidnimo iyo lamaane -
Deegaanka ayaa wuxuu siiyaa talooyin iyo tusmooyin qoyasaska ahaanshaha waalidnimo, narnaarinta ubadka iyo tayeynta lamaane.
Qofina uma baahna inuu keli ahaado
Qofina uma baahna inuu keli ahaado, xitaa haddeysan qaraabadu ku caawineyn. Si walbaba ilmuhu Daryeele waa mudnaanta koowaad masuuliyadooda. Ilmuhu waxay xaq u leeyihiin xiriirka ehelkooda labada waalidba xitaa haddey is fureen waalidku.
Ilmuhu inta ay da’ yarta yihiin wey ka nugul yihiin dadka qaangaarka ah, sidaa darteed ayuu degaanku masuul uga yahay badbaadinta kobaca iyo ladnaansha ilmaha. Taas darteed ayey Finland uga sameysatey qodob dastuuri ah ilaalinta iyo horumarinta xaquuqda ilmaha.